स्वर्ण महोत्सवलाई सफल पार्न भू .पू. बिद्यार्थीको भेला - NepalDut NepalDut
पोखरा महानगरपालिका २२ स्थित पुम्दी भुम्दीको शुक्रराज माविको स्वर्ण महोत्सवलाई सफल पार्न भू.पू. बिद्यार्थीहरुको भेला आयोजना हुने भएको छ ।
यही मंसिर १५ गते बिद्यालय परिसरमा भू.पू. बिद्यार्थीहरुको भेला आयोजना गरिएको शुक्रराज मावि, भू.पू. बिद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष बालकृष्ण बरालले बताए ।
२०४२ साल देखि हालसम्म प्रबेसीका परिक्षा तथा एसईईमा सहभागी भएका सम्पुर्ण बिद्यार्थीहरुको भेला आयोजना गरिएको अध्यक्ष बरालले जनाए । बिद्यालय स्थापनाको ५० बर्ष पुगेको अवसरमा स्वर्ण महोत्सव मनाउन लागेकोले उक्त महोत्सवलाई सफल पार्न भू.पू. बिद्यार्थीहरुको समेत महत्वपूर्ण भुमिका रहेकोले भेला आयोजना गरिएको उनले जनाए ।
बिद्यालयमा हाल नर्सरी देखि १० कक्षासम्म अग्रेंजी माध्यमबाट अध्ययन हुने गरेको छ भने प्लस टुमा व्यबस्थापन र शिक्षा संकाय गरी करिब ४ सय जना बिद्यार्थीहरु रहेका छन। बिद्यालयमा हाल प्राबिधिक शिक्षा पशुपालन समेत कक्षा संचालन हुदै आएको छ ।
बिद्यालयमा हाल शिक्षक कर्मचारी गरी ३६ जना रहेकाछन। बिद्यालयमा कक्षा एक देखि पाँचसम्म निः शुल्क शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउदै आएको छ भने खाजाको समेत व्यबस्था गरेको बिद्यालयका प्राचार्य नरनाथ बरालले जनाए ।